Demir ပိုးလမ်းမကြီး၏အဓိကအချက်မှာ RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
[16 / 11 / 2019] Bursa မြို့ပြမီးရထားလမ်းစီမံကိန်းများသည် ၀ န်ကြီးဌာန၏အစီအစဉ်တွင်မပါ ၀ င်ပါ	16 Bursa
[16 / 11 / 2019] Istanbul Metro ပြုံးနေသောဗီဒီယို	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[16 / 11 / 2019] TSIAD ရှိအစီအစဉ် Trabzon မီးရထား	61 Trabzon
[16 / 11 / 2019] သြစတြီးယားမီးရထားပေါ်တွင်TÜDEMSAŞမှထုတ်လုပ်သောခွေးများ	58 Sivas
[16 / 11 / 2019] စက်ဘီးဖြင့်ကျောင်းတက်နေသောကလေးများမှအဓိပ္ပါယ်ရှိသောသတင်းစကား! 'ဓာတ်ဆီမလောင်ပါနဲ့ဆီမလောင်ပါနဲ့'	35 Izmir
[16 / 11 / 2019] TCDD စက်ပြင်သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပါမည်	06 တူရကီ
[16 / 11 / 2019] Marmaray ဘူတာတွင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တွင်ကျနေသောလူဟောင်းသည်ရထားအောက်တွင်ရှိသည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်သံပိုးလမ်းမကြီး၏အဓိကအချက် Marmaray
08 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
သံ Silk Road Lock ကိုပွိုင့် Marmaray အဆိုပါ BTK လိုင်းကာဇက်စတန်နှင့် Azerbaijan've နောက်တော်သို့လိုက်ရာကုန်တင်မီးရထားမှ Marmaray ဥရောပနောက်ဆုံးတရုတ်မီးရထား Express ကိုသုံးပြီး Xi'an ၏တရုတ်မြို့ကနေထွက်စတင်ဂျော်ဂျီယာမှတဆင့် Kars မှတဆင့်တူရကီသို့ ဝင်. ထို့နောက်ဥရောပမှတဆင့် marmaray ပြွန် access ကိုရောက်ရှိခဲ့သည်။ One Generation One Way စီမံကိန်း၏နယ်ပယ်အတွင်းတရုတ်ထံမှပထမဆုံး 850 မီတာရှည်သောကုန်တင်ရထားသည် Chang Ankara မီးရထားဘူတာတွင်အခမ်းအနားဖြင့်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးသံမဏိလမ်း၏အဓိကကျသည့် Marmaray ကို ဖြတ်၍ Kapıkuleနယ်စပ်ဂိတ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ရထားလမ်း၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကြောင့်ရထား၏ပထမပိုင်းကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြင့်ခရီးထွက်ခဲ့ပြီးKapıkuleတွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ မွန်းတည့်ချိန်နာရီတွင်Kapıkuleနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ခြင်းသို့ရောက်သောအပိုင်းအစ ၂ ခုသည်ပထမ ဦး ဆုံး X-Ray scan နှင့် 21 လှည်းနှစ်ခုဖြင့်ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ရထားသည်ဘူဂေးရီးယားစက်ခေါင်းနှင့်အတူKapıkuleနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာမှခတ်ချက်မြို့တော်ပရာ့ဂ်သို့ထွက်ခွာခဲ့သည်။ ရထားဟာသံပိုးပိုးလမ်းမကိုဖြတ်ပြီးပရာ့ဂ်၊ ဆားဘီးယား၊ ဟန်ဂေရီနဲ့ဆလိုဗက်ကီးယားကိုဖြတ်ပြီးပရာ့ဂ်ကိုရောက်မှာပါ။
တရုတ် - ဥရောပမှသံဘူးပိုးလမ်းမကြီးသည်ဘာကူ - တီဘီလီစီ - ကရထားမီးရထားကို ဖြတ်၍ အာရှမှဥရောပသို့ရေအောက်လမ်းကြောင်းပေးသည့် Marmaray ပြွန်ကူးဖြစ်သည်။ တရုတ်နှင့်တူရကီအကြားကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချိန်2တိုက်ကြီး, 10 တိုင်းပြည်,2တထောင် 11 ကီလိုမီတာလမ်းကြောင်း 483 ရက်ပေါင်း "ရာစုစီမံကိန်း" Marmaray ကျော်လွန် 12 ပင်လယ်ကပင်အရှေ့ဖျားဒေသနှင့်အနောက်တိုင်းဥရောပအကြားကာလ၌ပေါင်းစည်းသော 18 ရက်လျှော့ချခဲ့သည်။
Baku-Tbilisi-Kars လိုင်းနှင့် Marmaray ကို ဖြတ်၍ အလယ်စင်္ကြံမှတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်အခြားစင်္ကြံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အချိန်နှင့်ခွန်အားကိုသက်သာစေလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ဒေသတွင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း၏အလွန်သမိုင်းဝင်ခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကီလိုမီတာထောင်ပေါင်းများစွာခရီးနှင်ခဲ့သောဤရထားသည်ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခေတ်သစ်၏အမှတ်အသားဖြစ်သည်။
ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမ, တူရကီလမ်းဆုံ 31 / 08 / 2019 တူရကီတစ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာ 21 ထူထောင်ဖြစ်ပါတယ်စတင်ရန်အင်္ဂလန်မှတိုးချဲ့အဖြစ်တရုတ်မီးရထားလမ်းစီမံကိန်းကိုနယ်ပယ်။9ဖြင့်ပြီးစီးခဲ့သောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာကုန်ပစ္စည်းစီးဆင်းမှု၏အခြေခံဖြစ်လိမ့်မည်။ အရေးအကြီးဆုံးခြေလျင်ကတော့ akkanakkale တံတား…
သံပိုးလမ်းမကြီး၏စက်ဝိုင်း Completing 04 / 12 / 2018 TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ İsa Apaydınဒီဇင်ဘာလတွင် Raillife မဂ္ဂဇင်းက“ သံပိုးလမ်းဖောက်ခြင်း” ကိုခေါင်းစဉ်တပ်ထားသောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ TCDD အထွေထွေမန်နေဂျာ APAYDIN ​​၏ဆောင်းပါးသည်ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးသက်တမ်းရှည်သည်။
အဆိုပါသံပိုးလမ်းမကြီး၏ပထမဦးဆုံးမီးရထားတူရကီအတွက်ပွဲထွက်ခဲ့ပြီး 04 / 11 / 2019 အဆိုပါသံပိုးလမ်းမကြီး၏ပထမဦးဆုံးမီးရထားတူရကီထဲသို့ဝင်ပြီးလျှင်, တရုတ်နှင့်တူရကီနိုင်ငံ၏ခေါင်းဆောင်မှုအောက်, 653ဘီလီယံအထိလူဦးရေကိုထိခိုက်လိမ့်မည်ဟုစီမံကိန်း၏ "တစျခုမှာခါးပတ်တစ်ခုမှာလမ်းမ" အရေးပါအဆင့်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ပြီးစီးခဲ့သည်။ စီမံကိန်းနယ်ပယ်အတွင်း…
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆိုပါခြမ်းတံခါးကိုသော့ခတ် Lock ကို Cylinder (TÜVASAŞ) အိမ်ရာဝယ်ယူမှုအပေါငျးတို့သလေးထောင့်အလုပ်မလုပ် lock 06 / 03 / 2013 တူရကီ Wagon စက်မှုလုပ်ငန်း Inc ၏နူးညံ့သောအသိပေးစာ Rectangular သော့ခတ်ဘေးထွက်တံခါးသော့ခတ် Lock Barrel အိမ်ရာဝယ်ယူမှု (15 PEN) ကိုဖွင့်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရလေလံဆွဲလိမ့်မည်။ ဖိုင်နံပါတ် - 20130122 လေလံ ...
Ardahan နိုင်ငံတကာမီးရထား၏ Key ကိုပွိုင့်သူများဖြစ်ကြလိမ့်မည် 14 / 10 / 2015 Ardahan သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမီးရထားလမ်း၏အဓိကနေရာတွင်တည်ရှိသည်။ Ardahan ၏လူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေအာဒန်တက္ကသိုလ် (ARU) စီးပွားရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးသိပ္ပံ ကိုဖတ်ပါ။ ထိပ်တန်းစီးပွားရေးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဆန်းစစ်ချက်များအရအာဒဒန်နှင့်အိုင်ဂရစ်ပြည်နယ်များ - အဗ္ဗဒူလာအဗ္ဗဒူလာTopcuoğlu
Erzurum ရှိငြိမ်းချမ်းရေးစမ်းရေတွင်း Viaduct ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်
II ကို။ Abdulhamid ၏အိပ်မက် Hejaz မီးရထားမီးရထားဘူတာသည်ပြန်လည်ထူထောင်နေသည်
Istanbul Metro ပြုံးနေသောဗီဒီယို
TSIAD ရှိအစီအစဉ် Trabzon မီးရထား
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆိုပါခြမ်းတံခါးကိုသော့ခတ် Lock ကို Cylinder (TÜVASAŞ) အိမ်ရာဝယ်ယူမှုအပေါငျးတို့သလေးထောင့်အလုပ်မလုပ် lock
Ardahan နိုင်ငံတကာမီးရထား၏ Key ကိုပွိုင့်သူများဖြစ်ကြလိမ့်မည်
နယူးပိုးလမ်းမ, အဘာကူ-Tbilisi-Kars ရထားလမ်း
ပိုးလမ်းမ၏ပထမအကြိမ်5ရထားသည်နိုဝင်ဘာလတွင် Marmaray ကိုဖြတ်ကျော်မည်
Marmaray အဆိုပါသံ Silk Road နိုင်ငံများအားလုံးခွန်အားတူး
ဝန်ကြီး Arslan Kars-Tbilisi-ဘာကူသံပိုးလမ်းမကြီးရဲ့ပထမဦးဆုံးအချိန်ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2019 (339) အောက်တိုဘာလ 2019 (608) စက်တင်ဘာလ 2019 (557) သြဂုတ်လ 2019 (509) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (502) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (582) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (426) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (504) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (970) ဇူလိုင်လ 2012 (859) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)